Vital Oil & Natural Gas 01. Providing for Today Contact Now Know How Solutions 02. Innovations Contact Now Energy & Commodities 03. Industry Contact Now
Brighter Energy Company, LTD သည် ကမ္ဘောဇအုပ်စုနှင့် PPTOR ကုမ္ပဏီတို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလက်အောက်ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းလုပ်ငန်းသုံး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးတာရှည်ခံရေနံထွက်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ မျှော်မှန်းချက်သည် စီးပွားတိုးတက်မှုနှင့် အတူရပ်ရွာ အကျိုးပြုမှုကိုပါရည်ရွယ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် လူမှုတာဝန်ယူမှုကို အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ခံယူထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့်ရေနံအဆောက်အအုံနှင့် သိုလှောင်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းသီလဝါစက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိပါသည်။
ရေနံအဆောက်အအုံနှင့် သိုလှောင်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း(သီလဝါ) အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း
စီမံကိန်းအဝန်းအဝိုင်း၏ မီတာ ၅၀၀ အတွင်းတွင် ထိခိုက်လွယ်သောအရာများဖြစ်သည့်
လူနေအိမ်များ။ စာသင်ကျောင်းများ။ ဆေးရုံများမရှိပါ။
စီမံကိန်းမှ သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုမျိုးမရှိနိုင်ပါ။
ရေနံအဆောက်အအုံနှင့် သိုလှောင်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း(သီလဝါ) အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ရေနံအဆောက်အအုံနှင့် သိုလှောင်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း(သီလဝါ) အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း
Scoping of EIA for the development of Petroleum Terminal and Storage Project in Kyauk Tan Township (Near Thilawa SEZ) by Brighter Energy Company Ltd. (BE) Brighter Energy Company Ltd. (BE) is developing the petroleum Terminal and Storage Project located at the semi-urban in the Kyauktan Township to the south of .